ICanon EOS R7 Izofika Ngo-2022 Ukuzomaka Ukuphela Kwamakhamera EOS M - 【Ukuqhathanisa】 2022
ICanon EOS R7 iyeza ngo-2022 ukuzomaka ukuphela kwamakhamera we-EOS M
Amakhamera nama-Camcorder | 0 Amazwana
Ama-cartridge kayinki Canon PG-545 + CLI-546 BK / C / M / Y ama-multipack amnyama + umbala 8ml + 9ml ORIGINAL ...
Ubuchwepheshe bokuphrinta: inkjet; Isivuno sephepha: amakhasi angama-180; Imibala yokuphrinta: Mnyama, Umbala
Kuze kube manje, wonke amakhamera e-Canon's RF-mount mirrorless amamodeli abizayo, agxile emsebenzini anamathegi amanani abuhlungu kancane. Kepha izindaba ezinhle kubo bobabili abadubula abayizimfundamakhwela nabasafufusa ukuthi lokho kuzoshintsha nakanjani ngo-2022, ngokusho kwamahemuhemu amasha.
Amahemuhemu athembekile eCanon atshelwe 'umthombo oqinile' ukuthi 'iCanon' nakanjani izokhipha 'ikhamera ye-APS-C RF mount ngo-2022'. Isayithi liyekile ukuqamba imodeli noma imininingwane, isho kuphela ukuthi kungenzeka i-EOS R7 "engangena esikhundleni somugqa we-EOS M." Kodwa uma kubhekwa amahlebezi angenhla, ukufika kwe-EOS R7 ngokuqinisekile kuyisimo okungenzeka kakhulu.
Kube nokuqagela okukhulayo mayelana nokufika kweCanon EOS R7, noma okungenani ikhamera yeCanon RF-mount APS-C, isikhathi esingaphezu konyaka manje. ICanon Rumors yaze yabika ngoDisemba 2020 ukuthi enye yazo isivele ihlolwe endle futhi isuselwa kuCanon EOS R6 chassis.
Kungakhathaliseki ukuthi kungenxa yokubambezeleka okuvela kubhadane noma iqiniso lokuthi iCanon igxile kuCanon EOS R3 futhi yandisa uhlelo lwayo lwamalensi, kubonakala sengathi i-EOS R7 ebilindelwe ngabomvu imile ezinyangeni ezisanda kwedlula. Kepha kubonakala kucishe kuqiniseke ukuthi ikhamera ye-APS-C RF-mount izofika ngo-2022, njengoba iCanon Rumors inikeze ukuqagela kwabo inothi lamahemuhemu ithi ifana 'neqiniso'.
Umbuzo manje uwukuthi, kuzoba luhlobo luni lwekhamera futhi lokho kusho ukuthini ngochungechunge lwamanje lweCanon lwe-EOS M? Eyakamuva, eyafika ngo-2012 njengenye indlela engenasibuko kuma-EF-Mount DSLRs kaCanon, ibonakala ilahlekile. Manje iCanon igxile ekwenzeni ingilazi ephezulu yamakhamera ayo e-RF-mount, nakuba uchungechunge lwe-EOS M luzoqhubeka lunikeza izinketho ezingabizi kakhulu zabaqalayo iminyaka ezayo.
Kuzodingeka silinde amahemuhemu aqinile mayelana neCanon EOS R7, uma ngempela kuyikhamera yokuqala ye-RF-Mount enenzwa encane ye-APS-C, kodwa ukuqagela kwangaphambilini kuphakamise ukuthi mhlawumbe kungaba 'imodeli ehlanganisiwe eyingxube yabadubuli bezemidlalo. nabathwebuli bevidiyo. Uma isekelwe ekwakhiweni nasenjinini yeCanon EOS R6, ingaba iresiphi yekhamera edume kakhulu engenazibuko yakwaCanon.
Buyekeza: amakhamera we-next-gen Canon for hobbyists
(Isikweletu sesithombe: Avenir)
Usayizi wezinzwa uvame ukuba yinkomba enhle yentengo yekhamera nezilaleli eziqondiwe, futhi nakuba ochwepheshe abaningi, ikakhulukazi abathwebuli bendawo, besebenzisa amakhamera anezinzwa ezincane ze-APS-C, kulungile ukusho ukuthi ukufika kweCanon EOS R7 kuzovula ukusekelwa kwe-RF. izethameli ezintsha.
Ukuqagela kwangaphambilini kuphakamise ukuthi i-EOS R7 ngeke ibe imodeli yezinga lokungena, kodwa kunalokho "i-mini EOS R6" yabadubuli bezemidlalo nezilwane zasendle abafuna ikhamera esheshayo nelula. Kodwa futhi kungenzeka kube ngeyokuqala kwamakhamera amaningi eCanon RF-Mount angenazibuko, njengoba azongena esikhundleni somugqa omdala we-EOS M ngo-2022.
Kungani iCanon idinga uhlelo olusha ngokuphelele lwekhamera ye-APS-C engenazibuko? Abanye bangase bathi ngokubhuqa "thengisa izibuko eziningi," kodwa kunezizathu eziqinile zobuchwepheshe zokuthi kungani lokhu kunengqondo. Okokuqala, ukukhweza kwe-RF kunezinzuzo ezinhle kunezikhwezi ze-Canon zangaphambilini, okuhlanganisa nebanga elincishiswe kakhulu le-flange (isikhala esiphakathi kwendawo yokukhweza ilensi nenzwa yesithombe) kanye nendlela yedatha enebhendi ebanzi. Lokhu kusho ukuthi ungakwazi ukuklama imigomo emisha ebingenzeki ngaphambilini.
Kunengqondo futhi ukuthi iCanon, nabathwebuli bezithombe beCanon, babe nendawo eyodwa kuphela engenasibuko okufanele bakhathazeke ngayo. Leyo yinzuzo u-Sony avame ukuyithola nge-E-mount yayo, engatholakala kuwo womabili amakhamera we-APS-C kanye nohlaka olugcwele olungenazibuko. Lokhu kuzovumela ama-Canon snappers nabadali bevidiyo ukuthi babe namakhamera amabili noma ngaphezulu ababelana ngamalensi afanayo.
Enye inzuzo yezinzwa ze-APS-C ukuthi zinganikeza ububanzi obude (ngobude bokugxila obude obusebenzayo) kumalensi amancane, alula. Lokhu kusho ukuthi iCanon kufanele yakhe ingilazi yokukhweza ye-RF ehlangene kakhudlwana, noma okungenani ivule kahle i-RF mount kwabanye abakhiqizi bamalensi, ukuze isize amakhamera ayo amasha e-APS-C abone amandla awo. Kepha iCanon EOS R7, uma igcine ibizwa kanjalo, ingaba yisinyathelo sokuqala esithokozisayo kunoma ngubani ofuna ukuthenga ikhamera engenazibuko enamandla nehlangene ngo-2022.